China Focushape Slimming System vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Mechanical roller yekutsiva cavitation rf tekinoroji ine infrared
Zvakanakisa zveMuviri kukwiza muviri, mafuta burnig, lymphatic drainage
Iko kusanganisa kwakakwana kweRadio frequency, yakasimba kurira wave uye mekutenderera roller uye NC mutinhimira weyakaipa kumanikidza, riite iro rekupedzisira vhezheni yezvishoma zvekushandisa.
Radio frequency (RF) inoreva magetsi emagetsi anofambiswa uye anogona kuvhurwa, anozonzi RF muChirungu. Kupisa kusingagumi kunokonzera kudonha nekukasira kune iyo dermal collagen fibers uye inosimudzira kuchengetedzwa kweimwe nyowani collagen. Simba rinokonzera tembiricha yedermal tishu kusimuka, inowedzera okisijeni kuyerera kwemuviri, inovandudza ropa uye lymph kutenderera, inoita metabolism, kubvisa uye kupomhodza maseru maseru.
●Akasimba acoustic cavitation tekinoroji
Yakasimba acoustic slimming tekinoroji inotumira isingakuvadzi simba reyakasimba ruzha wave frequency uye simba kune dzakasiyana zvikamu zveadipose tishu munzira yekubatana coupling, mune musimboti weakasimba acoustic cavitation uye inoshandisa simba rinokonzerwa necavitation kuputsa mafuta maseru ehutachiona mafuta tishu .
Wavy mechanical roller, kunze kwekuita sema electrode ekuburitswa kweRF simba, inogona zvakare kuumburisa matambudziko ane dambudziko panguva yekurapa, yakafanana zvikuru nekunzwa kwetsika nzira yekusunda mafuta neruoko. Inogona kukurumidza kufamba pasisitendi yenzvimbo inogamuchira kurapwa, kumhanyisa kutenderera kwemuviri uye detoxication. Yakakura cellulite yakanyoroveswa uye kuora kunowedzerwa nekuumburuka. Kunze kwezvo, kutenderera kunogona zvakare kubatsira kumhanyisa kugadzirisa uye kugadzirisa kwemafuta eorenji.
● Cnc mutinhimira negative kumanikidza Sravana Sameeralu Serial 4th Technology
LASER, muChirungu - LASER, kushandurudza ndiyo LASER. 905nm yakatarwa wavelength ye semiconductor laser inogona kusimudzira kushomeka kwemvura pakati peganda nemhasuru maseru, inokurudzira kufamba pakati pemasero, shandisa maseru uye nekuvandudza kuganda kweganda. Nepo panguva imwecheteyo, inowedzera kutenderera kweropa risingabatike muropa-mudziyo, uye nekudonha muchetura wakawandisa kuburikidza neiyo lymphatic system, uye inogona kunyatso kuodza iyo kumeso pigment uye kupenya kuburikidza ne905nm mwenje mwenje.
Pashure: ABS 3D HIFU
Zvadaro: Q0 tetepa Vacuum Roller + Cavitaton + RF + infrared Chiedza
Inotakurika yemukadzi hifu
Inotakurika Tescar Therapy CET RET RF ine Vacuum ...
Muviri unobvisa masaja Machine